Thomas Tuchel oo Ogolaaday Inuu Arsene Wenger Ka Bedelo Kooxda Arsenal – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaThomas Tuchel oo Ogolaaday Inuu Arsene Wenger Ka Bedelo Kooxda Arsenal
Hiiraan Xog, Mar 26, 2018:- THOMAS TUCHEL ayaa ka bedeli doona tababare Arsene Wenger shaqada kooxda Arsenal dhamaadka xili ciyaareedkaan.
Majaladda Jarmalka ee Kicker, ayaa sheegay in tababare Tuchel qarka u saaran yahay inuu heshiis la galo madaxda kooxda ka dhisan Emirates.
Tababarihii hore ee Borussia Dortmund Tuchel ayaa iska diiday fursad uu ku maamulo kooxda Bayern Munich.
Bayern Munich ayaa raadineysa tababare cusub, iyadoo 72 jirka Jupp Heynckes si ku meel gaar ah shaqada kala wareegay Carlo Ancelotti.
Bayern Munich ayaa indhaha ku heysa tababare Tuchel, laakiin macalinka shaqa la’aanta ah ayaa indhaha ku haya inuu ka shaqeeyo Premier League.
Majalada Kicker ayaa sheegtay in 44-sano jirkaan uu indhaha ku hayo inuu la wareego shaqada Arsene Wenger.
Paris Saint-Germain iyo Chelsea ayaa sidoo kale lala xiriirinayay tababare Tuchel, laakiin waxa ay u muuqataa inuu ku sii jeedo Gunners.
Tuchel ayaa si wacan u yaqaana masuulka suuqa Arsenal Sven Mislintat, iyadoo labada shaqsi ay kawada shaqeeyeen Dortmund.
Mislintat ayaa ku biiray Gunners bishii December, ka dib markii uu ka tagay Dortmund koo laga ceyriyay tababare Tuchel.
Toogasho ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari